Mahafinaritra Soso-kevitra ho an'ny Mampiaraka ny koreana Girl
Mahafinaritra Soso-kevitra ho an’ny Mampiaraka ny koreana Girl
Efa nametraka ny zavatra iray maha-te ho tia koreana vehivavy? Tsy irery ianao koreana ny vehivavy no tena mitady, ary noho ny antony tsara. Raha mazava ho azy fa ny olona rehetra dia mitovy, ny s soa aman-tsara ny milaza fa misy be dia be ny tsara tarehy, ny manan-tsaina, mahaliana koreana ny vehivavy manerana izao tontolo izao, ka mihoatra noho ny azo inoana fa ianao ll latsaka tsara tarehy sarotra ho an’ny vehivavy koreana tamin’ny fotoana sasany eo amin’ny fiainana. Misy mihitsy aza mampiaraka tranga koreana antsoina hoe Tazo lazaina fa, indray mandeha ianao daty koreana vehivavy, dia ll na oviana na oviana te handeha indray mampiaraka ny vehivavy avy amin’ny firenena hafa. Ianao ll maintsy ho hitanao mihitsy raha ny s fahamarinana izany. Raha toa ianao mihevitra amin’ny fiarahana koreana tovovavy, misy ny sasany ankapobeny mampiaraka ny fomba fanao sy ny toro-hevitra tokony ho fantany mialoha. Raha zazavavy rehetra dia samy hafa, amin’ny ankapobeny, maro ireo koreana ny tovovavy toy izany koa ny fanantenana rehefa niaraka, ary dia mampiasa koa ny fiarahana amin’ny fombafomba sy ny teknika. Familiarize ny tenanao amin’ny fanantenana ireo, ary ianao ll ho lavitra mialoha ny lalao. Tsy misy tia ho lasa teo, noho izany dia mety koa hahatonga azy ho mety araka izay azo atao fa ny anao ll hahomby raha toa ianao mihevitra amin’ny manakaiky ny koreana zazavavy. Vakio eo ho ny tsara indrindra ny toro-hevitra sy ny teknika noho ny fanaovana ny nofy ny mampiaraka ny koreana hanorotoro ny zava-misy. Raha toa ianao nitsidika an’i Korea avy amin’ny firenena hafa ao amin’ny fialan-tsasatra na rehefa vaovao mponina ao Korea, tandremo fa avy hatrany dia manana fiarahana hevi-diso voatendry ho anao raha tianao izany na tsia. Tao Korea mampiaraka ny kolontsaina, ny fiheverana ny mpitsidika avy any amin’ny firenena hafa (indrindra fa ny tanora fotsy ny olona) dia hoe ianao indray ny mpilalao na ny nolazainy fa mpanenjika vehivavy. Izany dia t maninona raha mety dia ho bebe kokoa ny fahamarinana ny s ny indray mipi-maso ny fikambanana izay mahazo atao, noho izany dia re tsara tarehy be ny mandeha manodidina ny marika FAMPITANDREMANA: playboy ambony ny lohany rehefa manao ny lalana amin’ny alalan’ny Korea.
Izany dia tsy ny indray mipi-maso ny fifanarahana mpandika, ary raha toa ka manontany avy koreana vehivavy iray fa manana ny simia, misy dia tena tsara vintana izy ll manaiky ny fanasana sy mivoaka miaraka aminao. Fa lazaina, raha toa ka manomboka ny fiarahana samy hafa, izy ll ihany koa no hitondra anao ho meloka mandra-voaporofo fa raha tsy izany. Ny s mihoatra noho ny azo inoana fa izy ll te-hijery ny alalan ‘ny lahatsoratra sy hiresaka tantara, ary izy ll angamba tohotra ny alalan’ ny haino aman-jery sosialy mba hijery raha toa ka misy na dia kely dia kely ny porofo izay maneho fa ianao re nolazainy fa mpanenjika vehivavy. Raha tsy izany, nahavita ianao. Raha misy dia t, izy ll tsimoramora saingy azo antoka fa manomboka matoky ny fikasany sy ny mahaliana azy (ary ihany ny). Raha ny vaovao sipa te-handeha amin’ny alalan’ny finday, aza t mandà ny fangatahana mifototra amin’ny fitsipika. Ny s tsy izany izy tsy t matoky anao, ny s koreana ny kolontsaina dia milaza azy angamba ianao niresaka zazavavy hafa. Raha izany no mahatonga azy hahatsapa kokoa ny aina, dia tokony handinika izany. Ao korea mampiaraka ny kolontsaina, ny zavatra izay vehivavy manahy nosokajiana ho mora lasibatra amin’ny vahiny ny olona. Raha toa ianao ve vao nanomboka niaraka koreana vehivavy, misy tsara vintana fa izy s miahiahy momba na ianao na tsy mihevitra azy ho mora. Mba hanampiana ny fanomezan-toky ny vaovao ramatoa fa tsy t hahita azy izany, ho azo antoka ianao hitondra azy amin’ny fanajana sy ny tsy fanajana ny faritra. Izy ll angamba te-handray ny dingana voalohany dia ny fifandraisana tsikelikely mandra-izy dia azo antoka fa ianao no nanao azy, ary tsy mijery fotsiny ho haingana fling. Ah, efa an-taona fanontaniana izay tokony handoa rehefa tapitra ny daty. Ny olona rehetra dia manana ny hevitro, fomba iray na hafa, sy ny koreana ny vehivavy tsy misy hafa amin’ny izay lafiny izay. Nandritra ny taona maro, ny fenitra dia ny hoe ny olona mandoa fa tsy ny daty voalohany, fa koa ny ankamaroan’ireo daty izay mpivady mandeha amin’ny. Niantsoany ny volavolan-dalàna dia tena vitsy, ary ny vehivavy eo amin’ny daty dia tsy tokony handoa na inona na inona ampahany amin ny daty na dia taorian’ny sakafo hariva zava-pisotro na ny tsindrin-tsakafo. Raha izany no heverina ho ara-dalàna, ary mbola maro, koreana mampiaraka ny kolontsaina dia nanapa-kevitra ny hanodina ny vaovao, maoderina kokoa paradigm. Ny olona dia mbola andrasana ny vola ho an’ny sakafo hariva, fa raha izy no te, ny vehivavy ny daty mety handoavana taorian’ny sakafo hariva soju na gilasy. Ny mpivady dia hifandimby ny fandoavana isaky ny mijanona ny hariva noho izany, ohatra, raha ny olona mandray karama ho an’ny sakafo hariva, ny vehivavy dia avy eo handoavana ny soju, dia ny olona afaka mandoa ny gilasy, sns. Ny ara-pitondrantena ny tantara dia mihevitra ho manana ho ianao ll mila vola, fa aza t mitandrina ny vaovao sipa na daty avy amin’ny fandoavana raha izy no te haka ny kiheba ny tsindrin-tsakafo na kafe. Raha izany no mitranga, dia ny f mitondra ny manaraka maso. Raha izy tsy t, manolotra, dia mihevitra fa raha ny d te-hanohy izany fifandraisana ianao ll ilaina mba handoavana ny zava-drehetra ny roa manao ara-tsosialy. Araka ny fanomezam-pahasoavana any, ny ankamaroan’ny koreana ny vehivavy ho mora mandray anareo hampita ny fitiavana tamin’ny alalan’ny fanomezam-pahasoavana sy ny famantarana ny fitiavana (sy manao ny marina, ny ankamaroan’ny koreana ankizivavy dia manantena azy). Ho vonona ny handany lehibe amin’ny fitsingerenan’ny taona nahaterahan’i ny fanomezam-pahasoavana, ary ho vonona koa mividy fanomezana ho an’ny tsirairay ny fitiavana-centric koreana fety. Misy iray isam-bolana ny (eny, zava-dehibe), ka ireo aza t maintsy ho lehibe toy ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana, na fanomezana. Raha toa ianao indray hanorotoro amin’ny koreana cutie, ianao ve efa voaporofo izany amin’ny teboka manaraka ho antsika koreana zazavavy dia tsara ny fiarahana. Raha na iza na iza afaka mandeha amin’ny daty, mampiaraka ihany koa ny fanatanjahan-tena ianao raha tsara izany, ary ny koreana ny vehivavy no tompon-daka.
Ka ho vonona mba hifaninana
Rehefa koreana zazavavy lasa ny olon-tiany, mazava ho azy izy ll mampiseho tsy fivadihana sy ny hanolo-tena ho anao. Fa mandra-piandry izany, ho vonona ho amin’ny azy famindram-po. Izy ll mety mahay miala eo amin’ny hatsarany ary sao ho mahafatifaty, saro-pantarina, ary hamitaka indray mandeha ianao ll ho voafono manodidina ny rantsan alohan’ny fantatrao izany. Alohan’ny mandinika akaiky ny koreana zazavavy, ho fampitandremana. Raha toa ka mametraka azy ho hitan’ny olona eo ianao, ianao dia handeha na aiza na aiza. Tia azy izy ireo miantso azy koreana ny Tazo noho ny antony, ary ianao ll hahazo izany tazo tsy ho ela. Rehefa indray mampiaraka ny koreana tovovavy, ianao mifaninana amin’ny olon-drehetra foana, na tianareo na tsia. Ahoana ny dia fa aza dia atao, ny mangataka. Afaka misaotra haino aman-jery sosialy. Haino aman-jery sosialy goavana manerana izao tontolo izao, fa any Korea ny s lehibe noho ny fiainana. Rehefa ianao maka ny koreana sipa mba raitra sakafo hariva na mividy azy amin’ny alalan’ny fanomezana, izy no sary izany ka mametraka izany isaky ny sehatra media sosialy sy hafatra sehatra fa izy mampiasa izany fa ny namana dia afaka mahita izany avy hatrany. Zatra mba ho amin’ny resaka fampiharana ny hitandrina ny saina. Raha mbola haino aman-jery sosialy dia afaka ny ho lehibe satria izany mamela anao hifandray amin’ny namany avy lavitra sy hijanona mifandray ny ara-tsosialy faribolana, dia afaka ihany koa ny mahatonga be dia be ny fanerena sy ny fanahiana ho an’ny tovovavy sy ny lehilahy eo amin’ny fifandraisana. Raha toa ianao indray ny fizarana ny zavatra rehetra amin’ny olona rehetra, dia midika izany fa ianao re mampitaha ny tenanao rehetra. Vokatr’izany, ny ankizivavy dia mety mahatsapa fa mila ny ho mendrika izay ny namany dia maneho avy amin’ny fiainantsika raha toa ka misy olon-kafa dia tsara ny fialan-tsasatra, dia ll angamba te-hanomboka drafitra iray ihany koa. Toy izany koa, ianareo ll mahatsapa fa mila mitsoka ny ankizivavy miala amin’ny fanomezam-pahasoavana sy ny daty mikasa izany ianao, omeo azy ihany zavatra mba tena ho faly. Raha toa nandreraka, izany dia midika ihany koa be dia be ny voly. Ianao ll ho nankafy tsara tarehy, trano fisakafoanana sy ny fanaovana ny ankizivavy vaovao sambatra miaraka amin’ny tsara tarehy ny fanomezam-pahasoavana. Ianao koa foana ny fahaizana ny mampahatsiahy ny olon-tiany fa ny haino aman-jery sosialy ihany no manasongadina ny tena tsara indrindra avy amin’ny namany monina ry zareo tsy nandefa momba ny fandresen-dahatra ry zareo manana na ratsy ny andro, ry zareo ihany no mamoaka ny zava-nisongadina. (Fa tsy t midika izy azo antoka fa hihaino fa lojika, na izany aza.) Raha ianao amin’izao fotoana izao mampiaraka ny koreana zazavavy, iray amin’ireo zavatra izay angamba no nahasarika anao ny voalohany dia ny faharanitan-tsaina sy ny haingana ny sainy. Telo ampahefatry ny ny olon-dehibe vehivavy ao Korea manana ny oniversite, noho izany dia ll tena ho manana avo-tsaina ny resaka miaraka amin’ny vehivavy. Izany dia midika ihany koa dia mila mba hahazoana antoka fa ny teny koreana ny fahaiza-manao dia maranitra noho izany dia afaka hatrany ka noho izany dia aza t nitondra azy conversationally. Tsy misy olona te-mankaleo daty (na mankaleo sipany). Raha ny teny koreana ny fahaiza-manao dia t aiza izy ireo no tokony ho izy, ary te-borosy ny momba azy ireo haingana, jereo ny Minitra Fanamby sy hianatra ny koreana abidy tao anatin’ny ora iray sy tapany. Ny s kely ny fampiasam-bola mba hahazoana ho an’ny rehetra ny hiverina ianao ll hahazo ny fahafahana mangataka ny koreana tovovavy manana ny maso.
← Ny antony Tia Vehivavy koreana - Asia Mampiaraka ny manam-Pahaizana
Azar dia Chatroulette niverina avy any amin'ny maty, ary ny mandeha niparitaka be ny marina eo ambany ny orona →